ktmkhabar.com - ‘गर या मर’को अबस्थामा भिड्दै पोर्चुगल र नर्थ म्यासेडोनिया, कसले मार्ला बाजी ?
‘गर या मर’को अबस्थामा भिड्दै पोर्चुगल र नर्थ म्यासेडोनिया, कसले मार्ला बाजी ?
फिफा विश्वकप २०२२ को युरोपियन छनोट अन्तर्गतको प्ले अफ खेलको फाइनलमा पोर्चुगल र नर्थ म्यासेडोनियाबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। सो खेल नेपाली समयअनुसार मंगलबार राति (बुधबार बिहान) १२ः३० बजे शुरु हुनेछ।
यो खेल जित्ने टोलीले विश्वकपमा स्थान बनाउने छ भने अर्को टोलीको विश्वकप सपना समाप्त हुनेछ। त्यसकारण दुबै टोलीका लागि यो खेल निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। प्ले अफको सेमिफाइनल खेलमा नर्थ म्यासेडोनियाले इटालीलाई स्तब्ध बनाएको थियो भने पोर्चुगलले टर्कीलाई पाखा लगाएको थियो ।
हालसम्म पोर्चुगल नर्थ म्यासेडोनियाबीच एक खेलमा मात्र प्रतिस्पर्धा भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा यी दुई टोली आमनेसामने भएको उक्त खेल बराबरीमा सकिएको थियो । समूहबाट सिधै विश्वकपमा छनोट हुन नसकेको पोर्चुगल जसरी पनि विश्वकपमा स्थान बनाउने लक्ष्यमा छ। यता चारपटकको विश्व च्याम्पियन तथा युरो च्याम्पियन इटालीलाई हराउँदै नर्थ म्यासेडोनियाले विश्वकपमा स्थान बनाउन दाबेदारी प्रस्तुत गरिसकेको छ।
छनोट भएका देश
१५. दक्षिण कोरिया
१७. साउदी अरेबिया
क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्रतिद्वन्द्वी क्लब चेल्सी जाने चर्चा !
नेशनल युनाइटेडमा इन्डो नेपाल खुल्ला कराँते प्रतियोगिता सम्पन्न
नेशनल युनाइटेडमा इन्डो नेपाल खुल्ला कराँते प्रतियोगिता सुरु (फोटो फिचर)
कर्मा छिरिङलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा, टिमकै सदस्यबाट भयो नसोचेको धोका !
रियललाई लिग उपाधि
चर्चित फुटबलर क्रिस्टियानो रोनाल्डोकी प्रेमिकाले रोनाल्डोसँग लिन्छिन् सुन्दै चकित हुने पारिश्रमिक !